Minisitry ny Atitany : Fototry ny fifanolanana -
AccueilRaharaham-pirenenaMinisitry ny Atitany : Fototry ny fifanolanana
Tsy vao izao no voatonona ny anaran’ny minisitry ny Atitany, raha fifidianana no resahina. Efa hatrany amin’ ny fifidianana dingana voalohany no efa re, fa isan’ny mitsabaka feno anatin’ny raharaham-pifidianana ny tenany, raha raisina ny fijoroana vavolombelona nentin’ireo administratera sivily roa tetsy amin’ ny hotely Colbert. Raha ny fiarovan-tena nentin’ny minisitry ny Atitany dia tsy nandray anjara anatin’ny kilalao maloto ny tenany, saingy efa feno ny fanazavana nentin’ireo préfet miisa roa ireo. Hatreto dia mandeha ny feo, fa tsy administratera niofana teny amin’ ny ENAM ny minisitra nanamafy izany izay anton’ny olana ankehitriny. Raha ny fanazavana nentin’ny mpisolovava Hanitra Razafimanantsoa, dia anton’ny tsy fahafehezan’ny asany ny tsy nanaovany fianianana noho izy niofana fotsiny ihany mikasika ny raharaham-panjakana.
Mahagaga ihany tokoa mantsy ny fiarovan-tenan’ity minisitry ny Atitany ity raha nanontaniana manoloana izao hala-bato mihoa-pampana izao. Nambarany mantsy, raha toa misy ny manana porofo mikasika ny hala-bato, dia afaka toriana eny amin’ny fitsarana ny tenany. Iza anefa no handeha hamela porofo amin’ny halatra nataony raha toa manana ny fahefana hamafy izany, saingy efa afaka hitoriana ity administratera ara-piofanana ity ny fijoroana vavolombelona nataon’ny préfet roalahy. Izany hoe, mitonon-tena izany izao ny minisitry ny Atitany, satria dia ny tenany mihitsy no milaza fa toriana ny tenany raha nisy ny tsindry sy ny dian-tanany nandritra ny fifidianana. Izany hoe ireo préfet miisa roa nilaza fa misy ny tsindry izay nataon’ ny minisitra izany no andrasana hitory ny minisitry ny Atitany.